अब यात्रु ओ’सारे टुटल पठाओमाथि सरकारले का’रबाही गर्ने ! – Life Nepali
अब यात्रु ओ’सारे टुटल पठाओमाथि सरकारले का’रबाही गर्ने !
काठमाडौं । मोबाइल एपमार्फत भाडामा यात्रु बोक्दै आएका राइड सेयरिङ टुटल र पठाओले अब यात्रु ओसारपसार गरे कारबाहीमा पर्ने देखिएको छ । सरकारले पुनः तेस्रोपटक राइड सेयरिङलाई लक्षित गरेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै टुटल र पठाओको नाम उल्लेख नगरी तिनीहरूले दिँदै आएको राइड सेयरिङ सेवामाथि रो’क लगाएको हो । टेनिस रोकाले आजको राजधानी दैनिकमा लेखेका छन् ।
सूचनामा विभिन्न प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधनलाई विभिन्न माध्यमबाट आफूखुसी भाडा तोकी सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग गर्दा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२ को उपदफा १ मा भएको कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गर्न पाइनेछैन भन्ने व्यवस्था विपरीत भएको जनाएको छ । विभागले त्यसो गरेको पाइएमा सोही ऐनबमोजिम का’रबाही गरिने र सो सम्बन्धमा विभाग मातहत निकाय तथा अन्य सम्बन्धित निकायबाट क’डाइका साथ अनुगमन गरिने जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङले यस्ता समस्यालाई चाँडो कानुनी दायराभित्र ल्याएर हल गर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन् । उनले नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने के के विषय हुन्, त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्ने बताए । कानुनले तोकेभन्दा बाहिर कोही जान नसकिने र कानुनी तथा व्यावहारिक रूपमा समस्या भए त्यसलाई हल गरेर जानुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री नेम्वाङले यस सम्बन्धमा ट्याक्सी व्यवसायी संघले अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेकाले क्षेत्राधिकारलगायत विषयमा अदालतबाटै फैसाला हुनेमा जोड दिए ।
मन्त्री नेम्वाङले गत मंसिरमा टुटल र पठाओलाई तत्काल बन्द नगर्न निर्देशन दिएका थिए । विभागले त्यस समयमा पनि अहिलेकै जस्तो सूचना जारी गरेर टुटल र पठाओमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । मन्त्री नेम्वाङले यथावत् रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि पुनः टुटल र पठाओ निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा आएका थिए । मन्त्री नेम्वाङले त्यस समयमा आफूले निर्देशनभन्दा पनि कानुनी रूपमा के के सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न भनेको बताए । विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले संघीय सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिने भन्दै विधेयक पारित भएपछि”
राइड सेयरिङले वैधानिकता पाउने र नियम कानुन बनाएर सञ्चालन गर्न सकिने बताए । यसअघि, निजी प्रयोजनका लागि निकालिएका सवारीसाधनमा यात्रु बोक्न नपाइने भन्दै ट्याक्सी व्यवसायी यातायात विभागमा पुगेका थिए । टुटलले मोटरसाइकल तथा पठाओले मोटरसाइकल र उपत्यकामा चल्ने सामान्य ट्याक्सीलाई पनि आफूसँग आबद्ध गराएर मोबाइल एपमार्फत सञ्चालन गर्दै आएको छ । राइड सेयरिङ टुटल र पठाओमाथि यसअघि नै दुई पटक प्रतिबन्ध लगाएर पुनः फुकुवा गरिएको थियो । तत्कालीन यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको पालामा टुटल र पठाओ बन्द गर्ने प्रयास भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बन्द गर्न चाहेनन् ।
चौतर्फी वि’रोधपछि प्रधानमन्त्रीले नियमन गरेर व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने पक्ष लिएपछि टुटल र पठाओ पुनः निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो । पुनः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले गत मंसिरको पहिलो साता सूचना जारी गर्दै एउटा प्रयोजनका लागि दर्ता गरेर अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने सवारीसाधनमाथि कारबाही गर्ने चे’तावनी दिएर पठाओ र टुटल बन्द गर्न खोजेको थियो । ट्याक्सी चालकहरूको चर्को द’बाबपछि’ एक जना पठाओ चालक कार’बाहीमा समेत परेका थिए । मन्त्री नेम्वाङले मन्त्रालयमा नै बोलाएर यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हमाललाई ऐन नियममा संशोधन गर्नुपर्ने भए प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशनसमेत दिएका थिए ।
उनले प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली टुटल र पठाओलाई नियम बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले टुटल र पठाओलाई कानुनी मापदण्डमा ल्याएर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिँदै आएका छन् । यातायात सेवा सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । टुटल र पठाओ यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता छैनन् भने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालन हुँदै आएका छन् । टुटल र पठाओमा करिब ५० हजार राइडर आबद्ध छन् । टुटल र पठाओ ब’न्द गर्ने निर्णयसँगै सर्वसाधरणले सरकारको वि’रोध गर्दै आएका छन् ।
Previous दु:खद खबर, लेबनानमा एक नेपाली शान्ति सैनिकको मृ’त्यु
Next काठमाडौंबासीलाई घरबाहिर ननिस्कन सरकारको आग्रह”
11 mins ago kamal
हार्दिक बधाइ : पारस खड्का दशककै एशोसिएट खेलाडी अवार्डको मनोनयनमा !